विदेशमा कोरोनाबाट थप १३ नेपालीको मृत्यु - Malayakhabar
होम पेज स्वास्थ्य विदेशमा कोरोनाबाट थप १३ नेपालीको मृत्यु
काठमाडौं । कोरोना भाइरसबाट विदेशमा गत साता थप १३ जनाको ज्यान गएको छ । । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार युएईमा थप ६ जना, भारतमा पाँचजना, ओमानमा एकजना, कुवेत एकजना नेपालीको मृत्यु भएको हो । शनिबारसम्म विदेशमा मात्रै १४ देशमा १ सय ४३ जना नेपालीको कोरोनाका कारण ज्यान गएको एनआरएनएले जनाएको छ । हालसम्म बेलायत, युएई, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, कतार, आयरल्याण्ड, जापान, टर्की, नेदरल्याण्ड र स्वीडेन, ओमानलगायत देशमा रहेका नेपालीको कोरोनाका कारण ज्यान गएको छ ।
एनआरएनए स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा. सञ्जीव सापकोटाका अनुसार गत साता विदेशमा मध्यपूर्वका देशबाहेक अन्य मुलुकमा कोरोना संक्रमणको बढ्ने दर न्यून हँुदै गएको छ । शनिबारसम्म विदेशमा २८ हजार ९ सय १८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने २५ हजार २ सय २६ जना गैरआवासीय नेपाली कोरोनामुक्त भएका छन् ।
नेपालमा १५ हजार ४ सय ९४ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हालसम्म ६ हजार ४ सय १५ जना कोरोनामुक्त भएका छन् भने ३४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । हालसम्म विश्वभर ३७ देशमा रहेका नेपाली कोरोनाबाट प्रभावित भएका छन् ।
यसैबीच विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको ३ सय ५२ शवमध्ये १ सय १५ जनाको शव नेपाल ल्याएर अन्त्येष्टि गरिएको छ भने बाँकी १०५ शवको व्यवस्थापनको काम बाँकी छ । ती शवमध्य १ सय ३२ जना नेपालीको शव परिवारको सहमतिमा विदेशमै अन्त्येष्टि गरिएको एनआरएनए, कोभिड १९ उच्चस्तरीय समितिका प्रेस संयोजक चिरन शर्माले जानकारी दिनुभएको छ ।
आइएलओको ५ करोड १० लाख सहयोग
संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले एनआरएनएलाई ५ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको छ । आइएलओ र एनआरएनएबीचबीच मंगलबार उक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तका अनुसार विशेषगरी कोभिड १९ बाट प्रभावित मलेसिया, युएई, कतार र साउदी अबर गरी चार देशका नेपालीको सहयोगार्थ आइएलओले उक्त आर्थिक सहयोग गरेको हो । सो रकम कोभिड १९ ले श्रम बजारमा पारेको प्रभाव अध्ययन गर्न र श्रमिकको हितमा खर्च हुने बताइएको छ ।
एनआरएनएले ती मुलुकमा रहेका नेपालीको सहयोगका लागि नेपाली कूटनीतिक नियोगसँग समन्वय गरी कार्यालय स्थापना गरेर आफ्नो कार्य अघि बढाउने तयारी गरेको छ । ती कार्यालयबाट विदेशमा कोरोनाकै कारणले नोकरी छाड्न बाध्य पारिएकालाई सुरुमै कानुनी परार्मश दिने तयारी एनआरएनएको छ ।
एनआरएनएका महासचिव डा. शर्माले एनआरएनएले पहिलोपटक विदेशी संस्थाबाट यति ठूलो आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘संघका लागि यो एक कोशेढुंगा सावित हुनेछ, सधैं व्यक्तिको खल्ती ताकेर बस्नुपर्दैन, संस्था सञ्चालन गर्न अन्य स्रोतसमेत परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने यो एउटा सन्देश हो ।’ सहयोगका लागि एनआरएनएका उपाध्यक्ष डा. बद्री केसी, महासचिव डा. हेमराज शर्मा, डा. पुरु श्रेष्ठ र एकनाथ खतिवडाले प्रस्ताव तयार पार्नुभएको थियो । आइएलओले सो प्रस्तावलाई करिब ५ हप्ता लगाएर अध्ययन गरेपछि आर्थिक सहयोगका लागि तयार भएको एनआरएनएले जनाएको छ ।
अघिल्लो लेख ४३औं प्रयासमा सफल
पछिल्लो लेख नेपाल एयरलाइन्सका ३ जना पाइलट सहित १४ उडान कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि।
काठमाडौं उपत्यकमा थप ११९ सहित मुलुक भर ५९४ जनामा कोरोना पुष्टि